Banyere Anyị - Nanchang Fontainebleau Painting Materials Industrial Co., Ltd.
Olileanya na onye ọ bụla nwere ike ịchọta ahịhịa kacha mma site na Golden Maple.
Nanchang Fontainebleau Painting Materials Industrial Co., ltd ọkachamara na mmepụta na ire ahịa nke ndị na-ese ihe, nke gụnyere watercolor / mmanụ / acrylic / brushes mara mma na brushes mara mma. Ha nwere akara aka ha - Golden Maple, a mara ya dịka otu n'ime ihe osise kachasị mma na agba na China. Ha na-enye ụdị ọrụ OEM dị iche iche, nwekwara ike inyere gị aka ịmepụta ahịhịa na ika gị. Ọbụlagodi na inwere data brush, ha nwere ike imepụta ya, dị ka arịrịọ gị si rụpụta ọtụtụ brushes dị iche iche. Ha nwere enyere ndị ahịa aka mepụta ọtụtụ ama ama n'ụwa niile.
Nke a bụ ezinụlọ nwere ahịhịa nwere usoro mgbe ochie iji mezie brushes. Na 2008, ọlaedo ndị na-agba ọla edo bụ ndị ọsụ ụzọ zigara ụzọ ha gaa ahịa mba ofesi. Ugbu a Golden Maple artist brush anabatarala nke ọma na China.
nke bụ otu n'ime ndị kasị ibu ahịhịa-emeputa na China, na natara ọzọ na ndị ọzọ otuto si ama omenkà nke Ọzọ. About ha factory, ọ na-agba ọsọ ihe karịrị afọ 30, nwere ọgaranya ahụmahụ na rụpụta omenka agba ahịhịa. Ha nile ji aka mee, mgbe ahịhịa gwụchara, ga-enwe njikwa njikwa dị mgbagwoju anya. Maka imepụta brushes dị mma, ụlọ ọrụ na-azụkwa ọtụtụ igwe dị elu.
Ha chịkọtara ndị omenkà mara mma na ndị ọkachamara n'ihe nka, maka ebumpụta ụwa nke ọpụrụiche, pụrụ iche, brushes ndị ama ama maka ndị na-ese ihe akọwapụtara. Ha raara onwe ha nye na nka nke ezigbo onye nka ma nye ha uzo ohuru ichoputa ihe okike ha, na-enye ha ohere ikesa oru ha na ndi mmadu gburugburu uwa. Ha nabatara echiche ọhụrụ, na-achọ teknụzụ na ihe ọgbara ọhụrụ - wepụta oge ha n'ịmepụta ihe nka kachasị mma n'ụwa, nke ụfọdụ ndị na-ese ihe n'ụwa ji eme ihe.
Emi odude ke Jiangxi n'ógbè, Wengang obodo, nke bụ ihe kasị ochie ahịhịa mba na China na ihe karịrị 1600 afọ akụkọ ihe mere eme
- Nanchang Fontainebleau Ihe Ndị Na-ese Ihe Industrial Co., Ltd ..
Emi odude ke Jiangxi n'ógbè, Wengang obodo, nke bụ ihe kasị ochie ahịhịa mba na China na n'elu 1600 afọ akụkọ ihe mere eme.
A na-asọpụrụ Wengang dị ka obodo nke obodo brushes kemgbe 2004.
Ma anyị ụlọ ọrụ, anyị nwere ihe karịrị afọ 30 ahụmahụ nke rụpụta ọtụtụ dị iche iche iche iche imewe na omenka agba ahịhịa, anyị nwere ike ọtụtụ na-ekpo ọkụ ire ere ahịhịa anyị ahịa.
Ewezuga sable, ntutu anụmanụ pụrụ iche, brushes ndị ọzọ nwere nnwale n'efu.
Nkwado dị ike
Golden Maple obere iwu ukwu na-akwado, logo na-eri bụ otu oge ụgwọ.
A ga-aza ozi niile n'ime 24hours n'oge ụbọchị ọrụ.